မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး ပထမ ရသှားတဲ့ ပထမဆုရှငျ ကြောငျးသားလေးမှ ပေးတဲ့ သငျခနျးစာ
'' ခုနက စငျပျေါစကားတကျပွောတဲ့ မောငျလေး မဟုတျလား . . ."
'' ဟုတျကဲ့ပါအဈမ ''
'' တဈနိုငျငံလုံးမှာ Firstရထားတဲ့သူ ဆိုတော့ မောငျလေးစကားက သူတို့ အတှကျ သိပျအရေးပါတယျ... မောငျလေးပေးတဲ့ အကွံရဲ့ ဆိုးခွငျးကောငျးခွငျးကို သူတို့ ခံစားရလိမျ့မယျ...''
''မောငျလေးက ပွောတယျ ... ဆယျတနျးစာကို သငျတာ ဆယျတနျးစာကို တတျမွောကျအောငျလို့ ပွောတယျ
လကျရှိမှာက ဆယျတနျးစာမေးပှဲဟာ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့အတှကျ ဂိတျတံခါးလိုဖွဈနတေယျ...
အမြားစုဟာ ဆယျတနျးစာကို အမှနျတကယျတတျမွောကျဖို့ ထကျ အမှတျကောငျးကောငျးယူပွီး လိုငျးကောငျးကောငျးကို ရှေးခယျြခှငျ့ရဖို့ကွိုးစားနကွေတယျ
အရှိတရားဟာ အမှတျကောငျးမှ လိုငျးကောငျးရမှာ ...
ဒါကွောငျ့ လိုငျးကောငျးရဖို့ အမှတျကောငျးအောငျ ကွိုးစားကွမှာပဲ...
မောငျလေးလညျး ဒီပညာရေးစနဈနဲ့ firstဖွဈလာခဲ့တာကိုး...
ပညာရေးစနဈပွောငျးခဲ့ရငျ မောငျလေးလညျး firstဖွဈခငျြမှ ဖွဈမှာ''
''ကနြျော firstရခဲ့တယျ... ကနြျောဖွတေဲ့နှဈမှာ ကနြျော စာအတတျဆုံးပါလို့ အဓိပ်ပာယျမရသလို ကနြျော အအောငျမွငျဆုံးပါလို့လညျး အဓိပ်ပာယျမရဘူး...
ဖွပွေီးခဲ့တဲ့အထိတော့ Firstရအောငျလုပျမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ကွိုးစားခဲ့တာပဲ... နောကျတော့မှ ကနြျောတှေးဖွဈလာတာက... Firstရတော့ ဘာဖွဈသလဲဆိုတာပဲ
လူသိမြားလာတယျ... ဒါဟာ popularပါ... Successမဟုတျဘူး။ ခကျဆဈတှေ ၏သညျ၍ မလှဲကကျြခဲ့မိတယျ... ပွောရမယျဆိုရငျ ကနြျောသိပျပငျပနျးခဲ့တယျ...
ကနြျောဆရာဝနျမဖွဈခငျြဘူး၊ အငျဂငျြနီယာမဖွဈခငျြဘူး... ကနြျောဖွဈခငျြတာ စာရေးဆရာ...
ကနြေျာ့ဝါသနာကို ကနြျောသိနှငျ့နပွေီးသား... ဒါပမေယျ့ တက်ကသိုလျဝငျတနျးရဲ့ pressureအောကျမှာ ပွငျပစာပကေို အာရုံစိုကျခှငျ့မရဘူး... ကနြေျာ့သူငယျခငျြးတဈယောကျက ရိုးရိုးပဲအောငျတယျ...
သူက guitorတအားတီးခငျြတဲ့ကောငျ... အခြိနျပွညျ့ ဂဈတာလေးနဲ့...
သူက ဒီတက်ကသိုလျဝငျတနျးကို သူ့ဝါသနာနောကျသူစီးမွောရငျး သကျတောငျ့သကျသာလေး အောငျလာတာ....
သူက ကနြေျာ့ကို မေးခှနျးမေးတယျ
နှဦေးကာလာ မွူ ထသောခါ ကို ဘယျလိုနားလညျလဲတဲ့...
တြာခငျြးဖွဈကွောငျး ဝနျကွီးပဒသေရာဇာရေးကွောငျး ထနျးတကျသမားမိသားစုရဲ့ဘဝကို သရုပျဖျောခွငျးဖွဈကွောငျး စာထဲကပါတဲ့အတိုငျး သူ့ကို ပွောပွမိတယျ...
သူက ခေါငျးခါပွပွီး ငါမေးတာအဲ့လိုမဟုတျဘူးတဲ့
ခတျေကိုနှိုငျးယှဉျမယျဆိုရငျ သူတို့ခတျေမှာလညျး entertainment သဘောလေးတှရှေိသတဲ့ဗြာ
ဒါနနျးတှငျးက ပွညျသူကို ပွနျဖြျောဖွပေေးတာမြိုးဖွဈနိုငျတယျတဲ့...
အငျမတနျပူအိုကျတဲ့ အညာဒသေနှရောသီဟာ စိတျပကျြဖှယျအတိပဲ... ဒီလိုအခြိနျအခါမြိုးမှာ ကြေးလကျနေ ထနျးတကျသမားမိသားစုရဲ့ မပွညျ့စုံမှုလေးကို ကရုဏရသမှာ ဟာသလေးနှောရငျး ဘုရငျ့နားတျောပေါကျအောငျ ရညျရှယျတာမြိုး မဖွဈနိုငျဘူးလားတဲ့
ဟုတျတယျ ဒါကဗြာ ဒါအနုပညာ
ဒါဟာစာသကျသကျမဟုတျဘူး။ ကျက်မှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး ဒါဟာခံစားဖို့ . . .
The whole Burma first ရမယျ့သူက မသိခဲ့ဘူး... ဆယျတနျးကို ရိုးရိုးအောငျမယျ့သူက သိနတေယျ....
သူစာလလေ့ာခဲ့တယျ။ သူလလေ့ာသမြှဟာ စာမေးပှဲမှာ အမှတျကောငျးဖို့ ရညျရှယျပုံမရဘူး။ အနုပညာကိုအနုပညာလိုခံစားဖို့လို့ သူကတှေးတယျ...
ဝနျကွီးပဒသေရာဇာပေးတာကို ကနြျောလုံးဝမရခဲ့ဘူး။ အဈမ... ဆယျတနျးသငျရိုးဟာ ကနြျောတို့ကို စာမေးပှဲဖွဖေို့တဈခု တညျးရညျရှယျထားတာမဟုတျဘူး
တခြို့စာတှဟော အနုပညာ
တခြို့ စာတှဟော အကွံပွုစာ
တခြို့စာတှဟော ဆှေးနှေးတဲ့စာ...
ဆရာကွီးမဟာဆှရေေးတဲ့ ''မှနျကနျခွငျးနဲ့ရဲရငျ့ခွငျး''ဟာ ကကျြဖို့ မဟုတျဘူး... မကွောကျတရား ဆောငျးပါးတှကေို သူ့အမွငျသူ့ရှုထောငျ့တှနေဲ့ မြှဝခေဲ့တဲ့ ဆရာကွီးမဟာဆှခေျေါ နသေူရိနျ ကလောငျရှငျဟာ သူ့စာတှကေို ကကျြဖွစေဖေို့ ရညျရှယျခဲ့တာမဟုတျဘူး...
ကဗြာကို အလှတျရအောငျကကျြတိုငျး ကဗြာကိုခဈြပါတယျလို့ အဓိပ်ပာယျမရ ဘူး... ဝနျခံရရငျ ဂဈတာသမားလေးကို ကနြျော သိပျအားကတြာ....
သူက ယူသလောကျရခဲ့တဲ့ကောငျ... သူက leisureကဗြာလေးနဲ့ feelခံတတျတယျ...
ကနြေျာ့မှာတော့ ကဗြာသာ အလှတျရခဲ့တာ ကဗြာရဲ့ အဓိပ်ပာယျကို နှလုံးသားက မခံစားတတျခဲ့ဘူး
''What is this life if full of care
we have no time to stand and stare''တဲ့...
အဲ့ကဗြာကို မရပျမနားကကျြခဲ့တယျ၊ အခုတော့ ရယျမိတယျသိလား။ Relaxယူသငျ့ကွောငျးပွတဲ့ကဗြာလေးကို မောပနျးစှာကကျြမိခဲ့တဲ့အဖွဈကို ရယျခငျြနမေိတယျ...''
''ဒီလိုလုပျခဲ့လို့ ဒီလို firstဖွဈနတော မဟုတျဘူးလား''
''အဈမ သုတစှယျစုံတှဖေတျဖွဈလားမသိဘူး မောငျသိနျးလှငျ ဘာသာပွနျတဲ့ Believe it or not ယုံခငျြယုံ မယုံခငျြနထေဲမှာလညျး ပါလရှေိ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့လကျသညျးအရှညျဆုံး လူသားတဲ့ ...
ဂငျးနဈမှတျတမျးဝငျထားတယျ... လကျသညျးကွီးတှကေ တှနျ့လိမျရှညျလြှားနတေယျ... ဂငျးနဈဝငျခငျြတာတဈခုတညျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ဒုက်ခိတဖွဈအောငျ လုပျတဲ့သူတှေ...
သူတို့ကတော့ ကွံဖနျ ဂုဏျယူကွတာပေါ့... တဈကမ်ဘာလုံးမှာ ငါလကျသညျးအရှညျဆုံးဆိုပွီး...
နစေ့ဉျနထေိုငျရှငျသနျမှုမှာ ဒီသောကျရေးမပါတဲ့ လကျသညျးရှညျကွီးတှကေ ဘယျလောကျအနှောကျအယှကျ ပေးနမေလဲ... ရိုးရိုးသားသားဖွကွေညျ့ပါ။
နောကျပွီး ဘယျသူ့အတှကျ အကြိုး ရှိလဲ...
ဇှဲရှိတယျ စိတျရှညျသညျးခံမှုရှိတယျ ယုံကွညျခကျြရှိတယျ...
ဒါပမေယျ့ အမြားကောငျးဖို့အတှကျ မဟုတျသလို သူကောငျးဖို့လညျး မဟုတျဘူး... ရူးကွောငျမူးကွောငျ ကမ်ဘာကြျောလိုမှုအတှကျ...
ဒါသူ့အခှငျ့အရေးဆိုတာ မှနျပါရဲ့။ အရူးဘုံမွှောကျတဲ့ ဂငျးနဈစံခြိနျတခြို့ ကို ကနြျောကတော့ ကွိတျလှောငျမိတာပဲ...
အဲ့လိုပုံစံမြိုးနဲ့ကနြျော the whole burma firstဖွဈလာတယျ။ The whole burma firstဖွဈဖို့ အဓိပ်ပာယျမရှိတာတှေ ကနြျောလုပျခဲ့ရတယျလေ''
''ဆရာဝနျဖွဈခငျြသူက အမှတျကောငျးအောငျ ဖွဖေို့လိုတယျ အမှတျကောငျးမှလညျး ဆရာဝနျဖွဈမယျ... ဒါကွောငျ့ သူ့ကို သငျတဲ့ guideဆရာသို့မဟုတျ ကြူ ရှငျဆရာဟာ စာကို အနုပညာလို ခံစားဖို့ထကျ အမှတျရအောငျဖွဖေို့ အဓိကထားသငျလိမျ့မယျ...
''လမျးကကောကျတော့ ခွလှေမျးတှကေလညျး ကောကျနရေတယျ... ဆနျစငျရာ
ကညျြပှလေို့ကျရတဲ့ ပညာရေးစနဈမှာ အမှတျကောငျးအောငျသငျနတေဲ့ ဆရာတှကေို အပွဈတငျဖို့က ခကျတယျ...
ဆရာဝနျဖွဈလိုသူဟာ စာစီစာကုံးလကေ့ငျြ့နရေတယျ။ close typeဖွဖေို့ စာပိုဒျလိုကျ ကကျြနရေတယျ.... definitionတှကေို a,an,theက အစ မလှဲအောငျ ကကျြနရေတယျ... ဒါဟာ သူ့ဆရာဝနျဖွဈဖို့ လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြးအတှကျ အထောကျအကူဖွဈရဲ့လား...
ဒါပမေယျ့ ဆရာဝနျဖွဈခငျြသူကတော့ ဒီလိုကကျြရမယျ...
သငျကွားသူကလညျး ဒီလိုပဲ သငျကွားရလိမျ့မယျ...
လြှောကျသူအမှားမဟုတျသလို ဒီလိုလြှောကျဖို့ အကွံပွုသူ အမှားလညျး မဟုတျဘူး။
ဒါဟာ လမျးရဲ့အမှား... ဒါဟာ ပညာရေးစနဈရဲ့အမှား...
''တကယျလညျး ဆရာဝနျပညာဟာ အခကျဆုံးပညာရပျတဈခုမဟုတျလား ဒါကွောငျ့လညျး အတျောဆုံးတှကေို တောငျးဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ''
ကဲဗြာ... အဈမ သတျမှတျသလိုဆို ကနြျောက လောလောဆယျမှာ အတျောဆုံးပဲ... ဆရာဝနျလြှောကျမယျဆို ကနြျောပါမှာပဲ... ဆရာဝနျဖွဈဖို့ ကနြျောက အသငျ့တျောဆုံးပါလို့ အဈမထငျလား''
''ဖွပေါအဈမရဲ့ လကျရှိပညာရေးစနဈကို ယုံစားပွီး မောငျလေးက အသငျ့တျောဆုံးပါလို့ ဖွကွေညျ့လိုကျပါလား...
ကနြေျာ့ဝါသနာက အဓိပ်ပာယျရှိတဲ့စာရေးသူဖွဈဖို့ပဲ။ ဒီနိုငျငံမှာ ဝါသနာမပါဘဲ အမှတျကို နှမွောလို့ ဆေးကြောငျးတကျနသေူတှေ ဘယျလောကျတောငျရှိနကွေမလဲ...''
''ဒါပမေယျ့ ဒီလိုလိုငျးတှကေို အမှတျနဲ့ မခှဲလို့လညျးမဖွဈဘူးလေ။ ၂၄၀နဲ့ ဆေးကြောငျးတှေ လြှောကျနကွေမှာပေါ့...''
''ဘယျဖွဈမလဲ... အမှတျမြားရငျ အမှတျမြားတဲ့ ကောငျးကြိုးကို ခံစားသငျ့တာပေါ့''
''ဆယျတနျးမှာ သငျရသမြှဟာ general သဘောလောကျပါပဲအဈမ။ ဒီ generalမှာ ထူးခြှနျတာနဲ့ပဲ တက်ကသိုလျလို specializedမှာ ထူးခြှနျပါလိမျ့မယျလို့ လှနေံဓါးထဈမှတျလို့မရဘူး။ ဒီအတှကျ ဝငျခှငျ့စာမေးပှဲတှလေိုတယျ...
မငျးဆေးကြောငျးတတျဖို့အရညျအခငျြးပွညျ့မှီရဲ့လား ဒါကိုစဈဆေးဖို့ ဆေးကြောငျးဝငျခှငျ့အရညျအခငျြးစဈစာမေးပှဲလိုမယျ။ botanyယူဖို့ အရညျအခငျြးပွညျ့မှီမမှီ စဈဖို့လညျး လိုအပျတာပဲ...
ပညာရပျတိုငျးမှာ အဓိပ်ပာယျကိုယျစီ အခကျအခဲကိုယျစီ ဝါသနာလိုအပျမှု ကိုယျစီရှိနကွေတာပဲ...
ဆရာဝနျကိုလူတျောတှလေုပျ botanyကို လူညံ့တှလေုပျဆိုရငျ အဲ့ဒိ education planကို မှားတယျလို့ သတျမှတျမယျ....
Majorတိုငျးဟာ လိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ ဝါသနာကို ပွနျတောငျးဆိုရမယျ....
ဒီအတှကျလညျး ကြောငျးသူကြောငျးသားတှကေို ကွို informလုပျရမယျ... တက်ကသိုလျဝငျတနျးအောငျမွငျပွီး နောကျ ရှေးခှငျ့ရှိသော majorမြားဆိုပွီး... ပဉ်စမတနျးလောကျကတညျးက စမိတျဆကျပေးထားသငျ့တယျ။ ဒါမှ ကြောငျးသားဟာ သူ့ဝါသနာ သူ့ ဗီဇကို ကှဲပွားစှာနားလညျလာမှာ... ဒါမှ ပွတျသားတဲ့ရှေးခယျြမှုကို ကြောငျးသားက လုပျဆောငျနိုငျမှာ
ဝါသနာရယျ ဝါသနာပါရာကို လုပျခှငျ့ရသောအခှငျ့အရေးရယျ၊ ကွိုးစားမှုရယျပေါငျးမှ ကြှမျးကငျြသူဖွဈမယျ...
အကယျ၍ အဲ့ဒိအလုပျမှာ ပါရမီမြားပါခဲ့မယျဆိုရငျသူဟာ ကြှမျးကငျြမှုအပွငျ စှနျ့ဦးတီထှငျသူ အဖွဈပါ လမျးအသဈဖောကျလိမျ့မယျ
မွနျမာနိုငျငံမှာ စှနျ့ဦးတီထှငျသူတှေ ပြောကျရှနတေယျ... ပွနျရှာဖှခေငျြတယျ...''
''The whole burma first ရခွငျးအပျေါမှာ မောငျလေး ဘယျလို ခံစားရလဲ''
''ပြျောမယျလို့ ထငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အောငျစာရငျးမထှကျခငျမှာ ကနြျောလြှောကျမိတဲ့ လမျးအပိုတခြို့ အတှကျ နှမွောသလိုခံစားရတယျ
ဒီလမျးအပိုတှမှေမလြှောကျရငျ the whole burma firstမဖွဈနိုငျဘူးလေ...
ပွေးလမျးက ကှကေ့ောကျနတေော့ အကောကျအတိုငျး ကနြျောပွေးခဲ့တယျ။ ပွိုငျပှဲစညျးကမျးနဲ့ကိုကျညီလို့ ကနြျော ပထမရတယျ...
တခြို့က အဖွောငျ့အတိုငျးပွေးတယျ...
သူတို့ က စာတတျဖို့ကို ဦးစားပေးပွီးပွေးတယျ။ ကနြျောက အမှတျရဖို့ ဦးစားပေးပွီးပွေးတယျ
အမှတျမြားပွိုငျပှဲမှာ ကနြျော firstရခဲ့တယျ။ ကနြျော ပြျောသငျ့ရဲ့လားလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို မေးခှနျးထုတျမိနတေုနျးပဲ''
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ပထမ ရသွားတဲ့ ပထမဆုရှင် ကျောင်းသားလေးမှ ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
'' ခုနက စင်ပေါ်စကားတက်ပြောတဲ့ မောင်လေး မဟုတ်လား . . ."
'' ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်မ ''
'' တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ Firstရထားတဲ့သူ ဆိုတော့ မောင်လေးစကားက သူတို့ အတွက် သိပ်အရေးပါတယ်... မောင်လေးပေးတဲ့ အကြံရဲ့ ဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းကို သူတို့ ခံစားရလိမ့်မယ်...''
''မောင်လေးက ပြောတယ် ... ဆယ်တန်းစာကို သင်တာ ဆယ်တန်းစာကို တတ်မြောက်အောင်လို့ ပြောတယ်
လက်ရှိမှာက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အတွက် ဂိတ်တံခါးလိုဖြစ်နေတယ်...
အများစုဟာ ဆယ်တန်းစာကို အမှန်တကယ်တတ်မြောက်ဖို့ ထက် အမှတ်ကောင်းကောင်းယူပြီး လိုင်းကောင်းကောင်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်
အရှိတရားဟာ အမှတ်ကောင်းမှ လိုင်းကောင်းရမှာ ...
ဒါကြောင့် လိုင်းကောင်းရဖို့ အမှတ်ကောင်းအောင် ကြိုးစားကြမှာပဲ...
မောင်လေးလည်း ဒီပညာရေးစနစ်နဲ့ firstဖြစ်လာခဲ့တာကိုး...
ပညာရေးစနစ်ပြောင်းခဲ့ရင် မောင်လေးလည်း firstဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာ''
''ကျနော် firstရခဲ့တယ်... ကျနော်ဖြေတဲ့နှစ်မှာ ကျနော် စာအတတ်ဆုံးပါလို့ အဓိပ္ပာယ်မရသလို ကျနော် အအောင်မြင်ဆုံးပါလို့လည်း အဓိပ္ပာယ်မရဘူး...
ဖြေပြီးခဲ့တဲ့အထိတော့ Firstရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာပဲ... နောက်တော့မှ ကျနော်တွေးဖြစ်လာတာက... Firstရတော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာပဲ
လူသိများလာတယ်... ဒါဟာ popularပါ... Successမဟုတ်ဘူး။ ခက်ဆစ်တွေ ၏သည်၍ မလွဲကျက်ခဲ့မိတယ်... ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်သိပ်ပင်ပန်းခဲ့တယ်...
ကျနော်ဆရာဝန်မဖြစ်ချင်ဘူး၊ အင်ဂျင်နီယာမဖြစ်ချင်ဘူး... ကျနော်ဖြစ်ချင်တာ စာရေးဆရာ...
ကျနော့်ဝါသနာကို ကျနော်သိနှင့်နေပြီးသား... ဒါပေမယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းရဲ့ pressureအောက်မှာ ပြင်ပစာပေကို အာရုံစိုက်ခွင့်မရဘူး... ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ရိုးရိုးပဲအောင်တယ်...
သူက guitorတအားတီးချင်တဲ့ကောင်... အချိန်ပြည့် ဂစ်တာလေးနဲ့...
သူက ဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို သူ့ဝါသနာနောက်သူစီးမြောရင်း သက်တောင့်သက်သာလေး အောင်လာတာ....
သူက ကျနော့်ကို မေးခွန်းမေးတယ်
နွေဦးကာလာ မြူ ထသောခါ ကို ဘယ်လိုနားလည်လဲတဲ့...
တျာချင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာရေးကြောင်း ထန်းတက်သမားမိသားစုရဲ့ဘဝကို သရုပ်ဖော်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စာထဲကပါတဲ့အတိုင်း သူ့ကို ပြောပြမိတယ်...
သူက ခေါင်းခါပြပြီး ငါမေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့
ခေတ်ကိုနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် သူတို့ခေတ်မှာလည်း entertainment သဘောလေးတွေရှိသတဲ့ဗျာ
ဒါနန်းတွင်းက ပြည်သူကို ပြန်ဖျော်ဖြေပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့...
အင်မတန်ပူအိုက်တဲ့ အညာဒေသနွေရာသီဟာ စိတ်ပျက်ဖွယ်အတိပဲ... ဒီလိုအချိန်အခါမျိုးမှာ ကျေးလက်နေ ထန်းတက်သမားမိသားစုရဲ့ မပြည့်စုံမှုလေးကို ကရုဏရသမှာ ဟာသလေးနှောရင်း ဘုရင့်နားတော်ပေါက်အောင် ရည်ရွယ်တာမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလားတဲ့
ဟုတ်တယ် ဒါကဗျာ ဒါအနုပညာ
ဒါဟာစာသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ က်က္မွတ္ဖို့မဟုတ္ဘူး ဒါဟာခံစားဖို့ . . .
The whole Burma first ရမယ့်သူက မသိခဲ့ဘူး... ဆယ်တန်းကို ရိုးရိုးအောင်မယ့်သူက သိနေတယ်....
သူစာလေ့လာခဲ့တယ်။ သူလေ့လာသမျှဟာ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်ကောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ပုံမရဘူး။ အနုပညာကိုအနုပညာလိုခံစားဖို့လို့ သူကတွေးတယ်...
ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာပေးတာကို ကျနော်လုံးဝမရခဲ့ဘူး။ အစ်မ... ဆယ်တန်းသင်ရိုးဟာ ကျနော်တို့ကို စာမေးပွဲဖြေဖို့တစ်ခု တည်းရည်ရွယ်ထားတာမဟုတ်ဘူး
တချို့စာတွေဟာ အနုပညာ
တချို့ စာတွေဟာ အကြံပြုစာ
တချို့စာတွေဟာ ဆွေးနွေးတဲ့စာ...
ဆရာကြီးမဟာဆွေရေးတဲ့ ''မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရဲရင့်ခြင်း''ဟာ ကျက်ဖို့ မဟုတ်ဘူး... မကြောက်တရား ဆောင်းပါးတွေကို သူ့အမြင်သူ့ရှုထောင့်တွေနဲ့ မျှဝေခဲ့တဲ့ ဆရာကြီးမဟာဆွေခေါ် နေသူရိန် ကလောင်ရှင်ဟာ သူ့စာတွေကို ကျက်ဖြေစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး...
ကဗျာကို အလွတ်ရအောင်ကျက်တိုင်း ကဗျာကိုချစ်ပါတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်မရ ဘူး... ဝန်ခံရရင် ဂစ်တာသမားလေးကို ကျနော် သိပ်အားကျတာ....
သူက ယူသလောက်ရခဲ့တဲ့ကောင်... သူက leisureကဗျာလေးနဲ့ feelခံတတ်တယ်...
ကျနော့်မှာတော့ ကဗျာသာ အလွတ်ရခဲ့တာ ကဗျာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နှလုံးသားက မခံစားတတ်ခဲ့ဘူး
အဲ့ကဗျာကို မရပ်မနားကျက်ခဲ့တယ်၊ အခုတော့ ရယ်မိတယ်သိလား။ Relaxယူသင့်ကြောင်းပြတဲ့ကဗျာလေးကို မောပန်းစွာကျက်မိခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို ရယ်ချင်နေမိတယ်...''
''ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့ ဒီလို firstဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား''
''အစ်မ သုတစွယ်စုံတွေဖတ်ဖြစ်လားမသိဘူး မောင်သိန်းလွင် ဘာသာပြန်တဲ့ Believe it or not ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေထဲမှာလည်း ပါလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လက်သည်းအရှည်ဆုံး လူသားတဲ့ ...
ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ထားတယ်... လက်သည်းကြီးတွေက တွန့်လိမ်ရှည်လျှားနေတယ်... ဂင်းနစ်ဝင်ချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒုက္ခိတဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့သူတွေ...
သူတို့ကတော့ ကြံဖန် ဂုဏ်ယူကြတာပေါ့... တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ငါလက်သည်းအရှည်ဆုံးဆိုပြီး...
နေ့စဉ်နေထိုင်ရှင်သန်မှုမှာ ဒီသောက်ရေးမပါတဲ့ လက်သည်းရှည်ကြီးတွေက ဘယ်လောက်အနှောက်အယှက် ပေးနေမလဲ... ရိုးရိုးသားသားဖြေကြည့်ပါ။
နောက်ပြီး ဘယ်သူ့အတွက် အကျိုး ရှိလဲ...
ဇွဲရှိတယ် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုရှိတယ် ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်...
ဒါပေမယ့် အများကောင်းဖို့အတွက် မဟုတ်သလို သူကောင်းဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး... ရူးကြောင်မူးကြောင် ကမ္ဘာကျော်လိုမှုအတွက်...
ဒါသူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ မှန်ပါရဲ့။ အရူးဘုံမြှောက်တဲ့ ဂင်းနစ်စံချိန်တချို့ ကို ကျနော်ကတော့ ကြိတ်လှောင်မိတာပဲ...
အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျနော် the whole burma firstဖြစ်လာတယ်။ The whole burma firstဖြစ်ဖို့ အဓိပ္ပာယ်မရှိတာတွေ ကျနော်လုပ်ခဲ့ရတယ်လေ''
''ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူက အမှတ်ကောင်းအောင် ဖြေဖို့လိုတယ် အမှတ်ကောင်းမှလည်း ဆရာဝန်ဖြစ်မယ်... ဒါကြောင့် သူ့ကို သင်တဲ့ guideဆရာသို့မဟုတ် ကျူ ရှင်ဆရာဟာ စာကို အနုပညာလို ခံစားဖို့ထက် အမှတ်ရအောင်ဖြေဖို့ အဓိကထားသင်လိမ့်မယ်...
''လမ်းကကောက်တော့ ခြေလှမ်းတွေကလည်း ကောက်နေရတယ်... ဆန်စင်ရာ
ကျည်ပွေ့လိုက်ရတဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာ အမှတ်ကောင်းအောင်သင်နေတဲ့ ဆရာတွေကို အပြစ်တင်ဖို့က ခက်တယ်...
ဆရာဝန်ဖြစ်လိုသူဟာ စာစီစာကုံးလေ့ကျင့်နေရတယ်။ close typeဖြေဖို့ စာပိုဒ်လိုက် ကျက်နေရတယ်.... definitionတွေကို a,an,theက အစ မလွဲအောင် ကျက်နေရတယ်... ဒါဟာ သူ့ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ရဲ့လား...
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်သူကတော့ ဒီလိုကျက်ရမယ်...
သင်ကြားသူကလည်း ဒီလိုပဲ သင်ကြားရလိမ့်မယ်...
လျှောက်သူအမှားမဟုတ်သလို ဒီလိုလျှောက်ဖို့ အကြံပြုသူ အမှားလည်း မဟုတ်ဘူး။
ဒါဟာ လမ်းရဲ့အမှား... ဒါဟာ ပညာရေးစနစ်ရဲ့အမှား...
''တကယ်လည်း ဆရာဝန်ပညာဟာ အခက်ဆုံးပညာရပ်တစ်ခုမဟုတ်လား ဒါကြောင့်လည်း အတော်ဆုံးတွေကို တောင်းဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ''
ကဲဗျာ... အစ်မ သတ်မှတ်သလိုဆို ကျနော်က လောလောဆယ်မှာ အတော်ဆုံးပဲ... ဆရာဝန်လျှောက်မယ်ဆို ကျနော်ပါမှာပဲ... ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ ကျနော်က အသင့်တော်ဆုံးပါလို့ အစ်မထင်လား''
''ဖြေပါအစ်မရဲ့ လက်ရှိပညာရေးစနစ်ကို ယုံစားပြီး မောင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးပါလို့ ဖြေကြည့်လိုက်ပါလား...
ကျနော့်ဝါသနာက အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စာရေးသူဖြစ်ဖို့ပဲ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဝါသနာမပါဘဲ အမှတ်ကို နှမြောလို့ ဆေးကျောင်းတက်နေသူတွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေကြမလဲ...''
''ဒါပေမယ့် ဒီလိုလိုင်းတွေကို အမှတ်နဲ့ မခွဲလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။ ၂၄၀နဲ့ ဆေးကျောင်းတွေ လျှောက်နေကြမှာပေါ့...''
''ဘယ်ဖြစ်မလဲ... အမှတ်များရင် အမှတ်များတဲ့ ကောင်းကျိုးကို ခံစားသင့်တာပေါ့''
''ဆယ်တန်းမှာ သင်ရသမျှဟာ general သဘောလောက်ပါပဲအစ်မ။ ဒီ generalမှာ ထူးချွန်တာနဲ့ပဲ တက္ကသိုလ်လို specializedမှာ ထူးချွန်ပါလိမ့်မယ်လို့ လှေနံဓါးထစ်မှတ်လို့မရဘူး။ ဒီအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွေလိုတယ်...
မင်းဆေးကျောင်းတတ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မှီရဲ့လား ဒါကိုစစ်ဆေးဖို့ ဆေးကျောင်းဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲလိုမယ်။ botanyယူဖို့ အရည်အချင်းပြည့်မှီမမှီ စစ်ဖို့လည်း လိုအပ်တာပဲ...
ပညာရပ်တိုင်းမှာ အဓိပ္ပာယ်ကိုယ်စီ အခက်အခဲကိုယ်စီ ဝါသနာလိုအပ်မှု ကိုယ်စီရှိနေကြတာပဲ...
ဆရာဝန်ကိုလူတော်တွေလုပ် botanyကို လူညံ့တွေလုပ်ဆိုရင် အဲ့ဒိ education planကို မှားတယ်လို့ သတ်မှတ်မယ်....
Majorတိုင်းဟာ လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ဝါသနာကို ပြန်တောင်းဆိုရမယ်....
ဒီအတွက်လည်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကြို informလုပ်ရမယ်... တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး နောက် ရွေးခွင့်ရှိသော majorများဆိုပြီး... ပဉ္စမတန်းလောက်ကတည်းက စမိတ်ဆက်ပေးထားသင့်တယ်။ ဒါမှ ကျောင်းသားဟာ သူ့ဝါသနာ သူ့ ဗီဇကို ကွဲပြားစွာနားလည်လာမှာ... ဒါမှ ပြတ်သားတဲ့ရွေးချယ်မှုကို ကျောင်းသားက လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ
ဝါသနာရယ် ဝါသနာပါရာကို လုပ်ခွင့်ရသောအခွင့်အရေးရယ်၊ ကြိုးစားမှုရယ်ပေါင်းမှ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်မယ်...
အကယ်၍ အဲ့ဒိအလုပ်မှာ ပါရမီများပါခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာ ကျွမ်းကျင်မှုအပြင် စွန့်ဦးတီထွင်သူ အဖြစ်ပါ လမ်းအသစ်ဖောက်လိမ့်မယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေ ပျောက်ရှနေတယ်... ပြန်ရှာဖွေချင်တယ်...''
''The whole burma first ရခြင်းအပေါ်မှာ မောင်လေး ဘယ်လို ခံစားရလဲ''
''ပျော်မယ်လို့ ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အောင်စာရင်းမထွက်ခင်မှာ ကျနော်လျှောက်မိတဲ့ လမ်းအပိုတချို့ အတွက် နှမြောသလိုခံစားရတယ်
ဒီလမ်းအပိုတွေမှမလျှောက်ရင် the whole burma firstမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ...
ပြေးလမ်းက ကွေ့ကောက်နေတော့ အကောက်အတိုင်း ကျနော်ပြေးခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ကိုက်ညီလို့ ကျနော် ပထမရတယ်...
တချို့က အဖြောင့်အတိုင်းပြေးတယ်...
သူတို့ က စာတတ်ဖို့ကို ဦးစားပေးပြီးပြေးတယ်။ ကျနော်က အမှတ်ရဖို့ ဦးစားပေးပြီးပြေးတယ်
အမှတ်များပြိုင်ပွဲမှာ ကျနော် firstရခဲ့တယ်။ ကျနော် ပျော်သင့်ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းထုတ်မိနေတုန်းပဲ''